Isku-dubbaridida Ganacsiga Dhoofinta Adduunka ee Bursa ayaa sii socota | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGanacsiga Burcad-badeed ee Soomaliya
28 / 09 / 2018 16 Bursa, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa, oo qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo macaamil ganacsiga ajnabiga ah ee ganacsiga adduunka, ayaa sii waday kobcinta dhoofinta bisha Sebtembar. Mashruuc ka mid ah mashruuca Global Fair Agency iyo Ur-Ge ee BTSO, barnaamijka 11 dibedda waxaa la qabtey Sebtembar. Guddoomiyaha BTSO Ibraahim Burkay, oo ah ganacsade Bursa ah oo ku yaal aagga caalamiga ah si uu u gaaro qaabdhismeed badan oo tartan ah, ayaa sheegay inay sii wadi doonaan shaqadooda.
BTSO waxay sii wadaa inay xubnaheeda u keento ururada ugu caansan adduunka ee qaybaha kala duwan waxayna gacan ka geysaneysaa sameynta xiriirro ganacsi oo cusub ee shirkadaha. 41 BTSO, oo leh in ka badan kun kun, ayaa abaabulay barnaamijka dibedda ah ee ku dhow 160 illaa iyo intii uu socday mashruucyada Ur-Ge ee la qaaday Hay'adda Caalamiga ah ee Cadaalada iyo Wasaaradda Ganacsiga. Ku dhawaad ​​kun oo kun oo ganacsi oo 40 ah ayaa ka qayb qaatay duulimaadka dhoofinta 6.
SEPTEMBER 11 CUNTADA SEPTEMBER QARAMADA SEPTEMBER
Mashruucyada dhoofinta BTSO ayaa sii waday inay buuxsamaan Sebtembar. Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa, oo saxiixday barnaamij caalami ah oo udhow 2018 ee 7 ee ugu horreeya 30, ayaa si guul leh u soo afjartay barnaamijka 11 ee dibadda ah, kaas oo lagu daray jadwalkeeda bisha Sebtembar. Xubnaha BTSO ee ka qaybqaatay waxqabadyada lagu abaabulay juquraafi kala duwan oo ka kala yimid Faransiiska ilaa Ameerika iyo Jarmalka ilaa Kazakhstan waxay ku noqdeen Bursa iyaga oo aasaasay aasaaska wadashaqeyn muhiim ah.
SIYAABAHA LAGU HELO
Shirkadaha ka shaqeeya qaybta dharka tiknoolajiyada bisha Sebtembar waxay booqdeen Rugta Ganacsiga Turkiga-Faransiiska ee Fair Premiere Vision iyo Texworld Fair oo lagu qabtay magaalada Paris iyagoo hoosta ka hadlay guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Uğur. Wakiilada qaybta gaadiidka waxay sameeyeen imtixaanaadyo ku saabsan bandhigga Automechanika oo lagu qabtay Jarmalka hoosta guddoomiye kuxigeenka Guddoomiyaha BTSO Cüneyt Sener iyo Guddoomiyaha Guddoomiyaha Muhsin Koçaslan. 'Bandhigga Cimilada ee booqday. Xubnaha BTSO ee ka shaqeeya qaybta cuntada, 'World Food Moscow Fair Fair' oo lagu qabtay dalka Ruushka ayaa waxaa ka socday xubno ka mid ah guddiga xubnaha Aytug Onur iyo Hashim Kılıç, xubnaha BTSO ee ka shaqeeya qaybta Marmomac - Cersasie 2018 Fair in Italy.
Mashruuca ugu Uur-D Turkey ee ay sameeyeen hay'adaha la BCCI, mashruuca Enhancement tartan caalami ah in la saxiixay September. Shirkadaha ka qayb galaya tartanka SPE Fair iyo Congress-ka ee USA oo loogu talagalay mashiinnada gaadiidka ee ka kooban mashaariicda Composite Ur-Ge ayaa booqday xarunta Ford ee Xarunta R & D taas oo ah calaamad muhiim ah ee qaybta gaadiidka. Xubnaha mashruuca Tiknoolajiyada Tareenka ee Ur-W ayaa ka qaybqaatay Bandhigga Berlin ee Notrans Berlin oo lagu qabtey Jarmalka iyada oo ka qaybqaatey Guddoomiyaha BTSO Muhsin Koçaslan.
Xubnaha mashruuca Bebe Carruurta Ur-Gaar waxay ka qaybgaleen shirarka B2B iyo booqashooyinka xarunta ganacsiga ee Kazakhstan iyo Kyrgyzstan iyada oo ka qaybgasha Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Maamulka ee BTSO Ismail Kuş. Wakiilo ka socda mashruuca Kim Kiimikada Ur-Ge ayaa ka qaybgalay kulannada ganacsiga labada kulan ee lagu qabtay Bucharest, Romania, iyadoo ka qaybgashay xubin ka tirsan Golaha BTSO ee xubin ka ah Baarlamaanka Mudane Duran.
HADDII AAD KA QAADEYSAY SUUQA SIYAASADDA SHARCIYADA "
Guddoomiyaha BTSO Ibraahim Burkay, Bursa wuxuu leeyahay khibrado badan oo wax soo saarka iyo dhoofinta, ayuu yiri. Burkay ayaa sheegay in shirkadaha ku yaal Bursa ay fursad u heleen in ay si hoose u eegaan horumarka ka jira qaybahooda iyaga oo la socda bannaannada dibada iyo ururada B2B. Mashruuca Safari ee Ganacsiga, Burkay wuxuu sheegay in sannadihii ugu dambeeyay 4, 17 ay isu keeneen in ka badan hal kun oo ganacsi oo ku xiran qaybaha magaalada Bursa, waxaana ku daray, "Dunida ganacsiga Bursa waxay leedahay awood halis ah oo soo saarka. Sida BTSO, waxaan rabnaa in shirkadaheena ay ka muuqdaan arena caalami ah iyo sidoo kale suuqyada gudaha. Shirkadaheenu waxay leeyihiin awood ay ku gaaraan tan. Waddan ahaan, waxaan ku jirnaa marxalad adag. Waxa kaliya oo aan ka bixi karnaa wakhtigan markaan la kulanno weerarrada dhaqaale ee soo saarista iyo dhoofinta. "
INADINA ISTICMAALKA INADINA EXPORT
Duqa magaalada Burkay ayaa sheegay in waxqabadka BTSO ee mashaariicda dhoofinta ee BTSO, tirada shirkadaha dhoofinta ee Bursa ay si aad ah u korodhay sanadadii ugu dambeeyay ee 5. Ilaa dhamaadka sanadkan, waxaan sii wadi doonaa dhoofinta Mareykanka, Faransiiska, Czech Republic iyo Serbia. Waxaan sii wadi doonnaa inaan deeqdeenna u siinno suuqyada caalamiga ah iyada oo la adeegsanayo Hay'adda Caalamiga ah ee Ganacsiga, Safaarada Ganacsiga, Ururada Cilmiga ah ee Ganacsiga, Xarumaha Ganacsiga Turkiga, Miisaannada Dalka iyo Golaha Ganacsiga. Waxaan rabnaa inaan kordhino tirada mashaariicdeena R & D ee kor u qaada awoodda tartan ee qaybaheena ka sarreeya 20
BTSO iyo KOSGEB SUPPORT
BTSO iyo KOSGEB waxay sii wadaan inay fududeeyaan kharashyada shirkadaha ka qaybgalaya safarrada ganacsiga ee lagu qabanayo baaxadda Hay'adda Cadaalada Caalamiga ah sida gaadiidka, hoyga iyo khidmadaha hagidda. Inkasta oo KOSGEB uu taageero ka siiyo shirkadaha ka qaybgalaya ururada, 3 kun oo pounds oo loogu talagalay wadamada ku dhow 5 kun oo gani oo ku yaal waddamo fog; BTSO sidoo kale waxay bixisaa taageero qof kasta oo codsanaya ilaa xaddiga 1.000 laba jeer sannadkii. Xubnaha BTSO sidoo kale www.kfa.com.t waa Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan alaabooyinka, waxaad codsan kartaa ururada la xiriira qaybahooda.
Balıkesir "Xayiraadda Warshadaynta Konteynarada"
Wareegga Wadooyinka ee Trabzon wuxuu ku sii socdaa Full Speed
World Business World
Nidaamka Isgaadhsiinta ee Ur-G